Noma yimuphi uhlobo umsebenzi ezimbonini kudinga ukwakhiwa efanele yenqubo ukukhiqizwa, okuyinto kuchazwa into yenqubo zabasebenzi ukuguqulwa (izinto zokusetshenziswa, imikhiqizo Semi-siphelile) e umkhiqizo osuphelile, odingekayo emphakathini.
Inhlangano yenqubo ukukhiqizwa kuhilela uxhumano okunengqondo izakhi zawo: zabasebenzi (umsebenzi womuntu), amathuluzi zomsebenzi (izindlela zokukhiqiza), izinqubo zemvelo (chemical, ngokomzimba, begazi), okuhloswe ngazo ishintsha izakhiwo zokusebenza into - ukuma kwayo, usayizi, izinga noma isimo.
Izimiso yenhlangano okunengqondo inqubo ukukhiqizwa.
Ekhona izinqubo ukukhiqizwa zahlukahlukene kakhulu, kodwa ngesisekelo inhlangano yabo esifanele nemihlahlandlela ethize ukulandela okuyinto ikuvumela ukuba nokwandisa ukuwasebenzisa ezimbonini.
isimiso yokuzihlukanisa kwamangqamuzana ngokwemisebenzi yawo. Ngokuhambisana nalesi simiso, inhlangano yenqubo ukukhiqizwa kumele kwenziwe ukuze for amayunithi ngabanye ukuba kuvikelwe ibhizinisi izinqubo ezithile noma imisebenzi ayisisekelo ngoseyili ezimbonini.
Ngokuhlanganisa isimiso. Lesi sinyathelo sibandakanya ukuthi ukulethwa zonke noma eminye imisebenzi, egqoke uhlamvu ezahlukene, ngaphakathi kweyunithi efanayo ukukhiqizwa (ukuphathwa, isixhumanisi).
Uma uthi nhlá lezi zimiso kungqubuzane. Ngumuphi kubo kumele inikezwe okuthandayo, inquma eyinkimbinkimbi imikhiqizo ekhiqizwa futhi liyasiza.
Isimiso emakamu. Lokhu kusho ukuthi isimiso ndawonye ngaphakathi yokukhiqiza isayithi eyodwa usebenzela imikhiqizo eyohlobo noma ukuqaliswa okufanayo ekwenzeni imisebenzi. Ukusetshenziswa Its ivumela ekusetshenzisweni ngokugcwele imishini ngohlobo olulodwa (yenyusa ukulayisha yayo), okwandisa nezimo of izinqubo.
isimiso of lunye. Luhilela ukulungisa umsebenzi isayithi ngayinye ncamashi inani elilinganiselwe imisebenzi, umsebenzi kanye nemikhiqizo. lunye ezingeni kunqunywa uhlobo izingxenye ekhiqizwa kanye ivolumu ambalwa of ukukhululwa kwabo. The ephakeme ezingeni of lunye lenkampani, le amakhono abasebenzi, umkhiqizo ephakeme kangcono. Lokhu kwandisa amathuba okuphathwa ezishintshayo ukukhiqizwa kanye nezindleko encishisiwe elihlobene ne yokulungiswa imishini. Ububi iyona monotony yomsebenzi kanye ukukhathala abantu.
Umgomo we universalization okuphambene isimiso of lunye. Inhlangano yenqubo ukukhiqizwa, ogxile lesi simiso, kuhilela ukukhiqizwa ezihlukahlukene izimpahla (noma ukuqaliswa izinqubo heterogeneous) ngaphakathi eyodwa ukusebenza. Ukukhiqizwa anhlobonhlobo imininingwane kudinga izinga kahle eliphezulu wekhono nokubandakanyeka imishini Amatebhe.
Umgomo we proportionality. Ukuphathwa ngendlela efaneleko inqubo ukukhiqiza nolimi kusukela ukuhambisana okungu phakathi inani imikhiqizo oluqanjwe iminyango ehlukene. Ukukhiqizwa izindawo amasayithi kumele athobele imishini yokulayisha futhi iyahambisana nomunye.
Isimiso ukuqhathanisa. Luhilela ukukhiqizwa ngesikhathi esisodwa (ukucutshungulwa) imikhiqizo ehlukahlukene ukuze ugcine isikhathi esichithwa ukukhiqizwa kwe-product yakho yokugcina.
I okuqhubekayo-ukugeleza isimiso. Inhlangano yenqubo ukukhiqizwa kufanele kwenziwe ngendlela yokuthi indlela into zomsebenzi komunye ukucubungula esigabeni kwesinye kwaba emfushane.
Isimiso Rhythmic wukuthi zonke izinqubo yokukhiqiza okuhloswe ngaso ukukhululwa kwe-Lesisemkhatsini womshini izingxenye kanye nemikhiqizo yokugcina angaphansi ukuphindaphindwa gqwa. Lesi simiso ivumela ukugeleza abushelelezi ukukhiqizwa ukhululekile ukwephula imigomo Ukuphumula.
embili Isimiso eqala iyunifomu ukulethwa umsebenzi intfo operation eyodwa kuya kwenye ngaphandle kokuphazamiseka noma ukubambezeleka.
Isimiso nezimo ivumela lithathelwe okusheshayo yezinguquko ukukhiqizwa amasayithi namaqiniso ukukhiqizwa elihlobene ne kwathatha ukukhiqizwa imikhiqizo emisha.
Lezi zimiso kule inhlangano ukukhiqizwa asetshenziswa ngokuhambisana abheke ukuthi kungenzeka yabo esisebenzayo. Underestimating izindima zabo kuholela izindleko zokukhiqiza, futhi ngenxa yalokho, ukuze ukwehla ukuncintisana imikhiqizo.
Ngubani umfundisi wabo? Ukuphila, inkonzo, abefundisi ukushumayela
Amaphilisi Abonayo "Ibufen ultra": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
Ikati ayikwazi Pee, yini okufanele uyenze? Kungani ikati Pee?
PJSC "Beriev" (Beriev Beriev.): Incazelo kanye nokubuyekeza
Radiators Bimetallic "Rifar": ukubuyekezwa. "Rifar" (radiators): amanani
Umama ka-Alexander Abdulov: biography, amaqiniso omndeni kanye nezithakazelisayo
ESR ngesikhathi sokukhulelwa. Lapho Ungethuki?